ကြှနျုပျတို့အကွောငျး | ပြပွဲ | လက်မှတ် | အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ
အလိုအလျောက် Pinch Pleater စက် | Semi- အလိုအလျောက်ကုလားကာခေါက်စက် | အလိုအလျောက်ကုလားကာ Pleating စက်
အလိုအလျောက်ထပ်တူကျသောဟမ်မင်ကုလားကာအပ်ချုပ်စက် | 15cm အောက်ရှိ Hemming အရွယ်အစား Box ကိုအလိုအလျောက် Synchronous Hemming စက် | 12cm အောက်ရှိ Hemming အရွယ်အစားသေတ္တာအလိုအလျောက်ထပ်တူပြုခြင်း Hemming စက် | 10cm အောက်ရှိ Hemming အရွယ်အစားသေတ္တာအလိုအလျောက်ထပ်တူပြုခြင်း Hemming စက် | 8cm အောက်ရှိ Hemming အရွယ်အစား Box အလိုအလျောက်ထပ်တူပြုခြင်း Hemming Machine | 4cm ဘေးတိုက်ထုပ်ခြင်းအရွယ်အစားသေတ္တာစက်အလိုအလျောက်ထပ်တူပြုခြင်း Hemming စက် | 3cm ဘေးတိုက်ထုပ်ခြင်းအရွယ်အစား Box အလိုအလျောက်ထပ်တူပြုခြင်းရှိမ်မမ်စက် | 3.5cm ဘေးထွက်ထုပ်ခြင်းအရွယ်အစား Box ကိုအလိုအလျောက် Synchronous Hemming စက် | 15cm အောက်ရှိ Hemming အရွယ်အနံ့ကုလားကာ Hemming စက် | ၁၂ စင်တီမီတာအောက်အမ်မမ်အရွယ်အစားအနံ့ကုလားကာ Hemming စက် | 10cm အောက်ရှိ Hemming အရွယ်အနံ့ကုလားကာ Hemming စက် | 8cm အောက်ရှိ Hemming အရွယ်အနံ့ကုလားကာ Hemming စက် | 4cm ဘေးထွက်ထုပ်ခြင်းအရွယ်အနံ့ကုလားကာ Hemming စက် | 3cm ဘေးထွက်ထုပ်ခြင်းအရွယ်အနံ့ကုလားကာ Hemming စက် | 3.5cm ဘေးထွက်ထုပ်အရွယ်အစားအနံ့ကုလားကာ Hemming စက် | 15cm အောက်ရှိ Hemming အရွယ်ကုလားကာ Multifunction Function Hemming Machine | 12cm အောက်ရှိ Hemming အရွယ်ကုလားကာ Multifunction Function Hemming Machine | 10cm အောက်အမ်မမ်အရွယ်အစားကုလားကာ Multifunction Function Hemming Machine | ၈ စင်တီမီတာအောက်အမ်မမ်အရွယ်အစားကုလားကာ Multifunction Function Hemming Machine | 4cm ဘေးထွက်ထုပ်ခြင်းအရွယ်အစားကုလားကာမျိုးစုံသုံးသော Hemming စက် | 3cm ဘေးထွက်ထုပ်ခြင်းအရွယ်အစားကုလားကာမျိုးစုံသုံးသော Hemming စက် | 3.5cm ဘေးထွက်ထုပ်ခြင်းအရွယ်အစားကုလားကာပုံစံမျိုးစုံရှိ Hemming Machine | အလိုအလျောက် Synchronous Hemming စက် Box ကို | အသေးစားကုလားကာ Hemming စက် | ဘက်စုံသုံးဟန်းမ်မန်းစက်
ကွန်ပျူတာကုလားကာမျက်မမြင်ချုပ်စက် | Computer Curtain Multi-Needle အပ်ချုပ်စက် | ကွန်ပျူတာကုလားကာပူးတွဲ Overlock ချုပ်စက်
ကွန်ပျူတာအလိုအလျောက်ကုလားကာဇာပုံစံဖြတ်တောက်ခြင်းစက် | ကွန်ပျူတာအလိုအလျောက်ကုလားကာပတ်တီးပုံစံဖြတ်တောက်ခြင်းစက် | ကွန်ပျူတာအလိုအလျောက် Shade Head ပုံစံဖြတ်တောက်ခြင်း
အမြင့်ကန့်သတ်ကွန်ပျူတာအလိုအလျောက်ဒေါင်လိုက်ကုလားကာ Stereotypes | 4m အမြင့်ကန့်သတ်ထားသောကွန်ပျူတာအလိုအလျောက်ဒေါင်လိုက်ကုလားကာပုံစံ | ၃ မီတာအမြင့်ကန့်သတ်ထားသောကွန်ပျူတာအလိုအလျောက်ဒေါင်လိုက်ကုလားကာပုံစံ | ၂ မီတာအမြင့်ကန့်သတ်ထားသောကွန်ပျူတာအလိုအလျောက်ဒေါင်လိုက်ကုလားကာပုံစံ | ကွန်ပြူတာအလိုအလျောက်မြန်နှုန်းမြင့်ဒေါင်လိုက်ကုလားကာပုံစံ | ကွန်ပျူတာအလိုအလျောက်ဒေါင်လိုက်ကုလားကာ Stereotypes | ကွန်ပျူတာအလိုအလျောက် Steam ဒေါင်လိုက်ကုလားကာ Stereotypes
ရောမမြို့လှံတံကုလားကာ Punchine စက် | အလှဆင်လှံတံကုလားကာထိုးကြိတ်စက်
စိတ်ကြိုက်အမြင့်ကန့်သတ်ဖြတ်တောက်ခြင်းစက် | ကုလားကာအလိုအလျောက်အမြင့်ဖြတ်တောက်ခြင်းစက် | 5m အမြင့်ကန့်သတ်ကုလားကာအလိုအလျောက်အမြင့်ဖြတ်တောက်ခြင်းစက် | 4m အမြင့်ကန့်သတ်ကုလားကာအလိုအလျောက်အမြင့်ဖြတ်တောက်ခြင်းစက် | 3m အမြင့်ကန့်သတ်သည့်ကုလားကာအလိုအလျောက်အမြင့်ဖြတ်တောက်ခြင်းစက်
6m ဂဟေဆော်သောအရွယ်အစား roller မျက်မမြင်ထည်ဂဟေဆော်စက် | 5m ဂဟေဆော်သောအရွယ်အစား roller မျက်မမြင်ထည်ဂဟေဆော်စက် | 4m ဂဟေဆော်သောအရွယ်အစား roller မျက်မမြင်ထည်ဂဟေဆော်စက် | 3m ဂဟေဆော်နိုင်သောအရွယ်အစား roller မျက်မမြင်ထည်ဂဟေဆော်စက် | အပြည့်အဝအလိုအလျောက် Ultrasonic ဖြတ်တောက်ခြင်းစက် 5m မက်စ်ဖြတ်တောက်ခြင်း | 4m Max အကျယ်အပြည့်အဝအလိုအလျောက် Ultrasonic ဖြတ်တောက်ခြင်းစက် | 4.5m မက်စ်ဖြတ်တောက်ခြင်းအကျယ်အပြည့်အဝအလိုအလျောက် Ultrasonic ဖြတ်တောက်ခြင်းစက် | 3m Max အကျယ်အပြည့်အဝအလိုအလျောက် Ultrasonic ဖြတ်တောက်ခြင်းစက် | ၃.၅ မီတာမက်စ်ဖြတ်တောက်ခြင်းအကျယ်အပြည့်အဝအလိုအလျောက် Ultrasonic ဖြတ်တောက်ခြင်းစက် | 2.5m မက်စ်ဖြတ်တောက်ခြင်းအကျယ်အပြည့်အဝအလိုအလျောက် Ultrasonic ဖြတ်တောက်ခြင်းစက် | Ultrasonic ကုလားကာဖြတ်စက် | ဓါးအအေးဖြတ်စက် | Air Crush ဖြတ်စက် | ultrasonic roller မျက်မမြင်ထည်ဖြတ်တောက်ခြင်းစက် | Multi-Function ဖြတ်တောက်ခြင်းစက် | အပြည့်အဝအလိုအလျောက် Ultrasonic ဖြတ်တောက်ခြင်းစက်
roller မျက်မမြင်အရွယ်အစားစစ်ဆေးရေးစက် | roller မျက်မမြင်များအသွင်အပြင်စစ်ဆေးရေးစက် | roller မျက်မမြင်ဓာတ်လှေကားစက်
roller မျက်မမြင် Drop ဘားဖြတ်တောက်ခြင်း | roller မျက်မမြင်ရောမဘားဖြတ်တောက်ခြင်းစက် | လူမီနီယမ်ဖြတ်တောက်ခြင်းစက်
12mm ဂဟေဆော်သော Mark Multifunction Roller မျက်မမြင်ဂဟေဆော်စက် | 8mm ဂဟေဆော်သော Mark Multifunction Roller မျက်မမြင်ဂဟေဆော်စက် | ဘက်စုံသုံး Roller မျက်မမြင်ဂဟေဆော်စက် | 12mm ဂဟေဆော်သော Mark Roller မျက်မမြင်ထည်ဂဟေဆော်စက် | 8mm ဂဟေဆော်သော Mark Roller မျက်မမြင်ထည်ဂဟေဆော်စက် | 6m ဂဟေဆော်နိုင်သောအရွယ်အစား Multifunction Roller မျက်မမြင်ဂဟေဆော်စက် | 5m ဂဟေဆော်ခြင်းအရွယ်အစား Multifunction Roller မျက်မမြင်ဂဟေဆော်စက် | 4m ဂဟေဆော်နိုင်သောအရွယ်အစား Multifunction Roller မျက်မမြင်ဂဟေဆော်စက် | 3m ဂဟေဆော်နိုင်သောအရွယ်အစား Multifunction Roller မျက်မမြင်ဂဟေဆော်စက် | roller မျက်မမြင်ထည်ဂဟေဆော်စက် | ဘက်စုံသုံး roller မျက်မမြင်ဂဟေဆော်စက်
ကုလားကာလုပ်ခြင်း၏အခြေခံနည်းလမ်းများနှင့်အဆင့်များ | ရိုးရာကုလားကာအပြောင်းအလဲနဲ့နည်းပညာ၏အခက်အခဲများကိုဖြေရှင်းပါ | pleating စက်၏အလုပ်လုပ်နိယာမ | 2021 ရှန်ဟိုင်း R + T ကနေရောင်ခြည်ပြပွဲ
ကုလားကာ multifunction hemming စက် | အလိုအလျောက် pinch pleater | ကွန်ပျူတာအလိုအလျှောက်ဒေါင်လိုက်ကုလားကာကျပုံစံ | အလိုအလျောက်ကုလားကာ ironing စက် | ထည်ကုလားကာစက်မှုလုပ်ငန်းများအလားအလာအပေါ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ | ကုလားကာကွန်ပျူတာပုံစံ splicing နည်းပညာစက် | အသေးစိတ်ကုလားကာထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်ကို
ပစ္စည်းကိရိယာကိုသင်မည်မျှတပ်ဆင်ရန်လိုအပ်သနည်း။ | သင်ပစ္စည်းကိရိယာတပ်ဆင်ရန်ပြည်ပသို့ ၀ န်ထမ်းမည်မျှစေလွှတ်ခဲ့သနည်း။ | သင့်အနေဖြင့်ဖြန့်ဖြူးသူအားရောင်းရန်ရည်မှန်းထားသောငွေပမာဏကိုလိုအပ်ပါသလား။ | ငါပိုက်ဆံလွှဲပေးလို့ရပါသလား။ | ကုန်ပစ္စည်းများကိုအခြားကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူမှသင့်စက်ရုံသို့ပို့ပေးလို့ရမလား။ ထိုအခါအတူတူ load? | ဘယ်တော့စက်ရုံကထွက်ပြီးမင်းရဲ့နွေ ဦး ပွဲတော်ရုံးပိတ်ရက်တွေလုပ်မှာလဲ။ | ရာသီဥတုအခြေအနေအောက်တွင်ပစ္စည်းကိရိယာများတပ်ဆင်နိုင်ပါသလား။ | သင့်ထုတ်ကုန်များကိုရာသီဥတုအခြေအနေအောက်တွင်တပ်ဆင်နိုင်ပါသလား။ | ကျွန်ုပ်လည်ပတ်ရန်ရှန်ဟိုင်းသို့မဟုတ်ဂွမ်ကျိုးတွင်ရုံးရှိသလား။ | ငါတို့အတွက်ပစ္စည်းကိရိယာများတပ်ဆင်ရန်သင်၏ ၀ န်ထမ်းများကိုပေးပို့နိုင်ပါသလား။ | သင့်ထံမှအပိုပစ္စည်းအချို့ဝယ်လို့ရပါသလား? | သင်၏ထုတ်ကုန်များကိုပြသရန်ပြပွဲသို့သင်တက်ရောက်မည်လား။ | သင်၏ပစ္စည်းများကိုဂွမ်ဇူးရှိကျွန်ုပ်၏ဂိုဒေါင်သို့ပို့ပေးလို့ရမလား။ | ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ဒီဇိုင်းဆွဲရန်အချိန်မည်မျှကြာမည်နည်း။ | သင်၏ထုတ်ကုန်စံနှုန်းကားအဘယ်နည်း။ | ပစ္စည်းကိရိယာကိုဘယ်လိုထုပ်ပိုးမလဲ | ပစ္စည်းများကိုကျွန်ုပ်တို့၏အရွယ်အစားနှင့်အညီဒီဇိုင်းဆွဲနိုင်ပါသလား။ | သင်၏ကုမ္ပဏီသည်ဤပစ္စည်းမျိုးကိုမည်မျှကြာအောင်လုပ်ခဲ့သနည်း။ | သင့်စက်ပစ္စည်းအတွက်မည်သည့်လက်မှတ်ရှိသနည်း။ | သင်၏စက်ရုံတွင်ဝန်ထမ်းမည်မျှရှိသနည်း။ | ကျွန်ုပ်နိုင်ငံတွင်သင်၏ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်မည်သို့ဆောင်ရွက်နိုင်မည်နည်း။ | ငါတို့နိုင်ငံမှာအေးဂျင့်ရှိလား။ | ပစ္စည်းကိရိယာ၏အမှန်တကယ်စီမံကိန်းပုံရှိပါသလား။ | သင်၏စက်ရုံသည်ဟိုတယ်နှင့်မည်မျှဝေးသနည်း။ | သင်၏စက်ရုံသည်လေဆိပ်နှင့်ဘယ်လောက်ဝေးပါသလဲ | ဂွမ်ဇူးမှသင်၏စက်ရုံအထိဘယ်လောက်ကြာမလဲ | မင်းရဲ့စက်ရုံဘယ်မှာလဲ။ | သင်အပိုပစ္စည်းအပိုများပေးပါသလား။ | သင့်ရဲ့ထုတ်ကုန်များအတွက်အသက်အပိုင်းအခြားကဘာလဲ? | အသေးစိတ်နှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ် installation လက်စွဲရှိပါသလား။ | OEM လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိပါသလား | မင်းနမူနာပေးသလား။ အခမဲ့လား၊ | သင့်ငွေပေးချေမှုသက်တမ်းကဘာလဲ။ | မင်းရဲ့ MOQ ကဘာလဲ? | သင်ကကုန်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီလား၊ ထုတ်လုပ်သူလား။ | မင်းပို့တဲ့အချိန်ဘယ်လောက်ကြာမလဲ | သင်၏စက်ရုံတွင်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းမည်မျှရှိသနည်း။